China 3003 H18 Aluminium Strip yeChannel Letter fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Izvo zvigadzirwa zvearuminiyamu mitsetse ndeye yakachena aluminium kana aluminium alloy yakakandwa-yakakungurutswa aluminium coil uye inopisa-yakakungurutswa aluminium coil, iyo inokungurutswa kuita nhete yealuminiyamu coil ine ukobvu hwakasiyana uye hupamhi neinotonhora inotenderedza chigayo, uyezve kureba yakachekwa kuita aluminium mitsetse ine. hupamhi hwakasiyana nekucheka muchina zvinoenderana nekushandisa.Aluminium strip chinhu chakakosha mukugadzirwa kwezvakasiyana siyana zvemaindasitiri, zvekutengesa uye zvevatengi.Air conditioners, mota, ndege, fenicha, zvimiro zvemukati uye zvimwe zvakawanda zvigadzirwa zvinogona kusanganisira kushandiswa kwealuminium strip.
1.Zvinhu: 1000, 3000, 5000, 6000, 8000 series
3.Kukora: 0.2-8.0, zvose zviripo
6.Coil uremu: 1-4 matani, maererano nezvinodiwa nemutengi
7.Surface Treatment: hairline, oxidized, mirror, embossed, nezvimwewo
Aluminium strip ine yakanakisa kugadzirisa kuita, yakanaka corrosion kuramba, kusimba kwepamusoro, hapana deformation mushure mekugadzirisa, firimu remavara riri nyore uye yakanakisa oxidation maitiro.
Zvinoenderana neiyo annealing mamiriro ealuminium strip, aluminium strip inogona kupatsanurwa kuita yakapfava (O state), semi-yakaoma (H24) uye yakazara yakaoma (h18).Iwo anonyanya kushandiswa anofanirwa kunge ari eese-soft series, nekuti O state iri nyore kutambanudza uye kukotama.Nyika dzinowanzo shandiswa ndidzo nyika uye h nyika.O inomirira soft state uye h inomirira hard state.O na h anogona kuteverwa nenhamba kuratidza chiyero chekuomarara uye annealing.
Iwo chaiwo mashandisirwo ealuminium strip anonyanya kushandura aluminium strip (transformer aluminium foil), aluminium tambo yeakakwira frequency welding hollow aluminium strip, aluminium strip yefin radiator, aluminium strip yetambo, aluminium strip yekutsikisa, aluminium strip yealuminium side strip, aruminiyamu-plastiki composite pombi, tambo, optical tambo, transformer, hita, shutter uye zvichingodaro.